Madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland oo Garowe ku kulmay – Radio Daljir
Luulyo 11, 2015 7:58 b 0
Sabti, Luuliyo 11, 2015 (Daljir) — Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo madaxweyne ku xigeenka Dawladda Puntland Eng. Cabdixakiin Cabdullaahi Cumar Camey ayaa maanta oo ay taariikhdu tahay 11-7-2015 garoonka diyaaradaha ee magaalada Garoowe ku soo dhaweeyey Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam iyo wefdi balaaran uu hogaaminayo oo booqasho rasmi ah ku yimi gudaha Puntland.
kadib markii si weyn loo soo dhaweeyey Madaxweyne Axmed Madoobe iyo weftigii balaarnaa ee la socday ayaa waxaa loo soo gedbiyey aqalka Madaxtooyada Dawladda Puntland ee magaalada , halkaasi oo ay si wadajira shir jaraa\_’id ugu qabteen Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam.
\_’\_’ Waxaa sharaf weyn noo ah in maanta madaxweynaha dawladda Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam noogu yimi booqasho gaaban , booqashadiisuna waxaa weeye xoojinta xiriirka wanaagsan ee ka dhaxeeya Puntland iyo Jubbaland \_’\_’ Ayuu yiri Madaxweyne Gaas.
\_’\_’ Puntland iyo Jubbaland waxyaabo badan oo na mideeya ayaa jira , waxaa kale oo muhiim ah in laga wada tashado oo dawladaha federaalka ka tirsani ay kawada hadlaan geedi socodka nabadda Soomaaliya , xaaladda hada lamarayo iyo waxa nagaga aadan anaga inaanu wax iska niraahno sida ay Soomaaliya usocoto waa muhiim \_’\_’ Ayuu hadalkiisa raaciyey Madaxweynuhu.
\_’\_’ Socodkaygu waxa uu ahaa bal inaan wadatashigii joogtada ahaa layeesho laysna weydiiyo bal maanta xaaladda Soomaaliya meesha ay marayso , iyadoo cidkale aan dhib loo geysaneyn bal Soomaali masiirkeeda meesha uu ku dambeyn doono in lays waydiiyo \_’\_’ Ayuu yiri Madaxweyne Axmed Madoobe.